17/12/2018 | La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
FAMPIHOROHOROANA TENY MAHAMASINA : NAHITANA GRENADY TEO AMIN’NY VAVAHADY ANATIN’NY KIANJA MONISIPALY
Nahitàna grenady tao amin’ny faritry ny kianja monisipalin’i Mahamasina, omaly vao maraim-be. Nolazain’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena fa fampiasa amin’ny fanazarantena fanaon’ny mpitandro ny filaminana izany. Hatairana sy fikoropahana ny an’ny mpiambina ny kianja monisipalin’i Mahamasina, omaly maraina nanodidina ny tamin’ny 6 ora sy sasany. Grenady iray no hita teo akaikin’ny vavahady “Padoc” miditra ao an-kianja,…
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAROZEVO : ANKIZILAHY TELO VOAHITSAKY NY KAMIAO TAO AN-TRANO
Telolahy no nohitsahin’ny kamiao teny Marozevo, omaly maraina. Nampivarahontsana ny nahita ny loza noho izy telolahy potsitra tanteraka tao ambanin’ilay kodiaram-be. “Ireo zazalahy roa izay naira nipetraka tao an-trano nitsahin’ilay kodiarana kamiao. Ny iray kosa dia voatsindrin’ilay fiara be ny vatany”, araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny mpitandro ny filaminana. Maty teo no eo ilay…
FANAFIHANA TANY AMBALAVAO : EFATRA TAMIN’IREO FOKONOLONA MATIN’NY DAHALO
Dahalo manodidina ny 20 lahy no nampitondra faisana ireo mponina ao Antanambao, tanàna iray any amin’ny kaominin’Andonaka, distrikan’Ambalavao, ny zoma tolakandro teo. Olona 4 tamin’ireo fokonolona no novonoin’izy ireo nandritra izany. Raikitra ny fanenjehana izay nataon’ireo zandary sy ireo andrimasom-pokonolona tao an-tanàna, ka 2 tamin’ireo dahalo no voasambotra. Olona 12 tamin’ireo fokonolona kosa no naratra…